Blaogera iray any Odessa mitondra feo hafa amin’ny fitantarana Shinoa momba an’i Okraina · Global Voices teny Malagasy
Mihaika ny fampielezan-kevitr'i Beijing sy Moskoa momba an'i Okraina i Wang Jixian
Voadika ny 28 Marsa 2022 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, English, українська, English
Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube an'i Wang Jixian.
Satria miditra amin'ny herinandro fahatelo ny fanafihana ataon'i Rosia an'i Okraina, dia nitodika tany Shina ny sain'izao tontolo izao mba hanombantombana ny toerana horaisin'izy ireo raha hanohana an'i Rosia amin'ny fitohizan'ny fanafihana izy. Nijanona ho diplaomatika tanteraka i Beijing hatreto, te-hiseho ho tsy miandany. Na izany aza, ao anatin'ny tontolon'ny haino aman-jery ao an-toerana voasivana mafy, hita mazava fa miandany amin'i Moskoa izy, midera an'i Rosia ary tsy mamela fomba fijery hafa hiseho. Saingy na dia teo aza ny fandraràna ny fomba fijery mpomba ny Okrainiana, dia nanapa-kevitra ny hizara ny traikefany amin'ny mpihaino Shinoa ilay bilaogera Shinoa iray monina ao Odessa.
Mpandraharaha avy any Beijing i Wang Jixian izay nanokatra orinasa IT tany Makedonia Avaratra ary nifindra tany Odessa, Okraina tamin'ny farany. Tamin'ny 1 Marsa 2022, namelona indray ny fantsony YouTube ​​izy ary nanomboka nandefa horonan-tsary mampiseho ireo seho an-dalambe avy any Odessa, anisan'izany ny fihetsiketsehana sy ny fivarotana. Saingy ny ankamaroany dia mizara ny fomba fijeriny momba ny ady ao Okraina izy, mampifangaro ny hatsikany mahazatra any Beijing amin'ny fifanakalozan-kevitra mampihetsi-po momba ny ady.
Miala amin'ny fitantarana ofisialy
Avy amin'ny lahatsariny voalohany, manohitra an-karihary ny fitantaran'i Moskoa sy Beijing i Wang amin'ilay hoe i Okraina no mpanafika tamin'ny ady. Antsoiny hoe ady, na fananiham-bohitra ny ady, fa ny fampahalalam-baovao Rosiana sy Shinoa kosa manohy milaza izany ho “hetsika miaramila manokana,” na 特色军事行动 amin'ny teny Shinoa.
Manamafy izy fa “tsy misolo tena ny Rosiana i Potinina” satria afaka mitsara avy amin'ireo mpiara-miasa aminy Rosiana izy. Mihomehy amin'ny fiampangana ihany koa izy fa karamain'ny governemantan'i Etazonia izy mba hizarana izany vaovao izany, izay niampangana azy tao amin'ny media sosialy Shinoa. Araka ny fanazavany dia ny fiarovana ny ain’olombelona no tena jereny.
Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtube Wang Jixian.
Saingy tao amin'ny lahatsary iray tamin'ny 7 marsa,, nizara ny fomba nisakanana ny kaontiny WeChat, izay tena ilaina mba hifandraisany amin'ny fianakaviany akaiky noho ny fanitsakitsahana ny “Politika Fampiasana azo ekena” izy, izay nanapaka azy tanteraka tamin'ny fifandraisana rehetra tany Shina, na tamin’ny alalan’ny fantsona ho an'ny daholobe na an-takonana.
Tamin'ny 14 Marsa, nizara lahatsary iray ihany koa izy izay nanehoany fa taorian'ny fanesorana ny fandraràna azy, dia niatrika antsojay tao amin'ny WeChat nataon'ny Shinoa mpisera iray izay niampanga azy ho mpamadika (汉奸, amin'ny teny sinoa), nanozona azy, ary nilaza hoe, “Ny Okrainiana dia Nazi avokoa” izy.
Tamin'ny 15 Marsa, namoaka lahatsary mitondra ny lohateny hoe “敖德萨，统一回复：我还想不想回国了？” (Odessa, valinteny ho an'izay rehetra nanontany hoe: Te hiverina any Shina ve aho?) izay nilazany ho an'ny zon'ny Okrainina mba hiaro ny tenan'izy ireo amin'ny herisetra Rosiana, ary manazava fa nanapa-kevitra ny hijanona ao Odessa izy satria ao no tranony amin'izao fotoana izao. Nofaranany tamin'ny filazana fa izay azony ambara ao amin'ny YouTube dia mazava ho azy fa voasakana ao Shina.
Mazàna maharitra eo anelanelan'ny 1–11 minitra ny lahatsariny, manana mpijery hatramin'ny 130.000 ary fanehoan-kevitra an'arivony, ny sasany midera azy na misaotra azy noho ny fizaràna ny fijoroany ho vavolombelona sy ny fitondrana feo miteny Shinoa hafa ho amin'ny adihevitra momba ny adin'i Rosia, ny hafa kosa miampanga azy ho mpamadika.
Lasa olo-malaza kely i Wang izao: Nankasitrahana sy nankatoavin'i Xu Xiaodong (徐晓东), mpahay haiady lasa olo-malaza amin'ny media sosialy, izay manana mpijery maherin'ny 76 tapitrisa ao amin'ny YouTube, ary manonona azy tsy tapaka ao amin'ny lahatsariny manokana, midera azy izy ary manameloka ireo Shinoa mpanafika azy ho mpampihorohoro.
Mazàna manapotika ireo feo tsy mitovy hevitra aminy i Beijing. Na izany aza, dia actif manan-danja ho an'i Shina i Okraina raha jerena ny toerana misy azy ao amin'ny sarintany Belt and Road Initiative, ny fahafahany manondrana sakafo betsaka sy ny indostria ara-miaramilany. Rehefa dinihina tokoa, dia nividy ny fiaramanidiny mpitatitra entana voalohany avy any Okraina i Shina tamin'ny taona 1998.
Satria mbola mitohy ny ady, mandravarava an'i Okraina, ary manimba ny toekaren'i Rosia ihany koa, mety tsy maintsy mandanjalanja bebe kokoa ny lahateniny i Beijing raha te hanomana ny sain'ny besinimaro amin'ny fitantarana tsy mainty sy fotsy loatra. Saingy hatramin'izao, tahaka ny tamin'ny fandroahana olom-pirenena Sinoa miisa 6000 avy any Okraina, tsy nety namela hevitra hafa hivezivezy ao amin'ny media sosialiny i Beijing.
Raha mila vaovao bebe kokoa momba ity lohahevitra ity, jereo ny fitantarana manokana ataonay momba ny Rosia manafika an'i Okraina